Ezuru ụgbọ elu - gịnị ka ị ga - eme?
Njem nleta Na ederede
Ndụ jupụtara n'ihe ijuanya! Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụ oge, nke a abụghị ihe na-egosi na ihe dị otú ahụ na-adịghị mma ga-eme gị. Ihe mere ị ga-eji nọrọ ọdụ maka ụgbọ elu nwere ike ịba ụba: i mehiere oge ahụ, jidere gị n'ụgbọ okporo ụzọ, nnyefe ahụ na-egbu oge ụgbọ elu gara aga, wdg. Otu esi eme ihe n'ọnọdụ ụfọdụ, isiokwu a ga-agwa.
Ozi zuru oke banyere ndebanye aha na usoro ịbanye
Enwere uzo abuo maka ugbua maka ugbo:
ịbịanyeghị akwụkwọ maka ndebanye aha ;
egbu oge na ọdịda.
Usoro nke ndebanye aha na ọdịda dị na ihe ndị na-esonụ algọridim:
ịlele akwụkwọ na tiketi ụgbọ elu;
nnyefe nke akpa;
nnata nke nbanye ;
na ụgbọ elu mba - ntụgharị nke njikwa njem paspọtụ;
ịnọ na ebe echere;
na ọkwa nke ọdịda - ịkwado ụgbọelu ahụ.
Usoro iwu aha:
n 'ime ụlọ: mmalite - awa 2 tupu ịpụ, na - agwụcha - minit 30-40 tupu ịpụ apụ;
na ụgbọ elu mba: mmalite nke awa 2.5, na-agwụ n'ime minit 40.
Ndebanye aha n'Ịntanet site na ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ga-ekwe omume karịa karịa awa 23 tupu ịpụ.
Ị bọtara maka ndebanye aha, mana ụgbọelu ahụbeghị
N'okwu a, ị nwere ike ịnweta ụgbọelu ahụ. N'ọtụtụ ọdụ ụgbọelu, e nwere ndenye ego maka ndị njem n'oge. Na-eburu n'uche na usoro a na-akwụ ụgwọ ihe dịka $ 60 (ndị ọrụ njem na-edekarị aha maka n'efu). Na enweghị mpempe akwụkwọ pụrụ iche, ọ dị mkpa iji ngwa ngwa chọta onye nnọchite anya ụgbọ elu nke nwere ike ịbanye n'ụgbọelu ruo mgbe ụgbọ elu ahụ kwụsịrị. Ma ekwesiri icheta na enwere usoro nkwadebe nke mbu, ya mere oburu na enweghi oge buru ugbua tupu onodu ugbo elu, igaghi enwe ike ichota n'ime ya, karia ma oburu na ichoro igabiga ugbua.
E debara aha gị n'akwụkwọ, ma ị nọ ọdụ maka ọdịda
Ọnọdụ a adịchaghị nkịtị, Otú ọ dị, ọ nwere ike ime na ị nọ ọdụ maka ọdịda. Oge ọdịda ga - ejedebe 15 ruo 20 nkeji tupu ịpụ apụ. A na-akpọ ndị njem na-edebanye aha, ma ọ pụtaghị maka ịbanye, na igwe okwu. Ị ga-akpọtụrụ onye nnọchiteanya ụgbọ elu ozugbo o kwere omume. N'okwu dị iche, a ga-etinye gị na ntanetị.
Ichere ụgbọelu ahụ n'ihi ụrụ gị
Ọ bụrụ na ụgbọelu ahụ ahapụghị gị, ị ga-ahụ ozugbo onye nchịkwa ụgbọelu ahụ. Ọ bụrụ na ịnwe ụgbọelu ikuku, ọ ga-enyere gị aka izipu ụgbọ elu ọzọ, karịsịa ma ọ bụrụ na tiketi gị nọ na ụlọ ahịa. Ma ịchọta ndoputa na ịzụta tiketi ọhụrụ ga-enwe ego gị. Otu tiketi nwere ụbọchị ọpụpụ ga-eme ka ị belata ụgwọ.
Ị gbafuo ụgbọ elu ahụ jikọtara ya na ụgbọ elu ụgbọelu
Ọ bụrụ na onye njem ahụ nọ ọdụ n'ihi ụgbọelu ụgbọelu, mgbe ahụ ụlọ ọrụ ga-etinye ya na ụgbọ elu ọzọ. Na enweghị ụgbọ elu ndị ọzọ taa, ị ga-anọrọ n'ụlọ nkwari akụ ma zigara n'echi ya.
Ọ bụrụ na ụgbọelu jikọtara bụ ụgbọ elu ọzọ, mgbe ahụ, ị ​​ga-ajụ maka akwụkwọ edeturu banyere oge na-agba ọsọ. Mgbe ahụ, gaa n'ụgbọelu ụgbọ elu ụgbọelu, nke ị na-agbapụ, ma gosi otu ederede banyere oge nke ụgbọ elu gara aga. Ị ga-eziga ụgbọ elu ọzọ! N'otu oge ahụ, ị ​​gaghị akwụ ụgwọ ọ bụla.
Ị nwere oge na ụgbọelu n'ihi ụda nke ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ n'ihi oge na ụgbọ oloko
N'okwu a, ị nwere ikike ịkwụ ụgwọ maka emebi emebi ihe onwunwe na omume. Jide n'aka na ị ga - esi n'aka onye ọkwọ ụgbọ ala nyocha nke taximeter ma ọ bụ ụgwọ azụmahịa, ebe ụbọchị, oge, ala gosiri. nọmba ụgbọala na ihe ndị dị mkpa nke ụgbọelu ahụ. Ọ bụrụ na ụgbọ oloko ahụ egbu oge, tinye akwụkwọ na tiketi maka isi ụgbọ okporo ígwè mgbe ụgbọ oloko rutere na ọdụ. Ọzọ, ị ga-edegara akwụkwọ isi ọrụ ụtụ isi ma ọ bụ onye na-ahụ maka njem, ebe ihe ahụ merenụ kwuru. Ihe a na-ekwu maka ya bụ mbipụta nke akwụkwọ na-akwado ọnwụ: tiketi, ụgwọ ọrụ, wdg. I nwere ike ịchọọ ụgwọ maka ma ego ahụ na ụgwọ nke ego ịkwụ ụgwọ, ụgwọ ụlọ, na ihe ndị ọzọ. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịrịọ ka ị kwụọ ụgwọ ụgwọ na ọnụego 3% kwa awa nke igbu oge. A na-eme nzọrọ ahụ na abụọ, na kaadị gị, isi nke ọrụ ahụ ga-eme ndekọ nke nnata nke nkwupụta ahụ. Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ jụrụ itinye akara, ọ dị mkpa ịnweta nkwado nke ndị akaebe abụọ ga-edekọ, mgbe a na-enyefe ihe ahụ, ma gosipụta data ha na ozi ha site na paspọtụ. Dịka nhọrọ - zipu ozi site na mail edenyere aha na ọkwa nke nnyefe. Jide n'aka na ịchekwa nnata ahụ ma rịba ama! Ọ bụrụ na ọrụ adịghị aza ma ọ bụ gbalịa idozi nsogbu a n'ụzọ na-adịghị anakwere gị, nweere onwe gị ịkpọtụrụ ụlọ ikpe ahụ.
Ebu ibu site na ụgbọelu nke ọ bụla
Nri nke Iceland
Waterfalls nke Panama
Omenala ọdịnala nke Singapore
Ihe ngosi nka nke Singapore
22 echiche na-aga nwa akwụkwọ mgbe ị na-akwaga n'obodo ọzọ
Ọdụ Ụgbọelu Norway
20 Iwu ndị metụtara nri na United States bụ ndị na-enweghị ike ime mgbanwe
10 foto ndị na-enyocha mbara igwe, bụ ndị mkpụrụ obi na-esi na ya banye n'ikiri ụkwụ!
Kedu esi egbutu Roses maka oyi?
Aka n 'aka aka - aka
Ngwọrọgwu ndi mmadu maka mmuta ntutu anya
Wine si nkịta bilie
Ugboro ole oke bekee bi - ole ole ka oke ulo oke bekee ga-ebi?
Garcinia maka ọnwụ
Ọkpụkpụ ugbo maka anu anu
Mgbanwe nke mmadụ
Cats na-adịghị molt
Ngwaahịa dị na ígwè
Ngo site na osisi ntụ
Saịbọn Barbaris - kụrụ ma lekọta
Mmekọahụ gbasara mmekọahụ - oge mbụ
Blake Lively agbanweela karia mmuta: foto site na ntaneti nke ihe nkiri ọhụrụ na Dublin
Okwute maka sofa
Kedu onye na-emegharị anya?
Ebe ndina na-aka aka
Ndị na-eyi uwe